Adoon fahmin ha fal-celin! Faallo – Radio Muqdisho
Waa dabiici weeyna wanaagsantahay mararka qaar in Bulshadu noqoto mid Indhaheedu furanyihiin oo lasocota dhaqdhaqaaqyada Ku xeeran mustaqbalkooda, laakiin waa in ay ahaataa mid miisaaman kuna salaysan xaqiiqo iyo xikmad, sidoo kalana waa in foojignaantaas ay noqoto labo dhinacle xumaanta iyo wanaagga isku si u odorosta waa haddii aragtidaasi ay ka imaanayso maskax dhexdhexaad ah oo aan dhinac lasafnayn afkaaro isdiidan.
Arartaan waxaan usoo qaatay iguna dhaliyay dhaqan aad usoo badanaya soona taagnaa sanadihii danbe kaas oo Ku qotoma ka falcelinta dhaqdhaqaaqyada Dawladeed ee dalka ka socda.
Mararka qaar waxeey umuuqataa in ay jiraan xoogag sugaya oo Dhufays igu jira meel uun ay Ka dhaleecayn karaan tilaabo kasta oo magac Dawladeed lagu qaado.
Meesha aan usocdo maaha Siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku jira loolanka Siyaasadeed oo iyaga laftooda ay tahay in ay lahaadaan halbeeg, hase ahaatee cidda ay tahay in miisaanka xajiso waa Shacabka, gaar ahaan aqoonyahanka aan Ka tirsanayn dhinac Siyaasadeed.
Iswaydiintu waa maxaad ku salaynaysaa falcelintaada marka aad maqasho talaabo Dawladdu qaaday?
keebaa kuu ah cabir oo sida uu u yiri aad rumaysanaysaa?
Adigu xog-ogaal maka tahay sheekada, aqoonse ma uleedahay?
Qof ahaan door makaaga banaanyahay sheekada?
Su’aalahaan iyo kuwa kale adigoon iswaydiin ha jawaabin sabab la’aan.
Arin kale oo mudan dul-istaag ayaa ah sida markasta ay igu muuqato in qiimayntu ugu liicdo dhanka Dawladnimada, tusaale sida ay dad badani ugu xiiso qabaan buunbuuninta dhaliisha uguma xiiso qabaan buunbuuninta amaanta, waana su’aal mudan in aan udirno Maskaxdeenna.
micnuhu muxuu noqon karaaa? ma jacayl loo qabaa dhaleecaynta mise waa fahamyaraan?
Isku soo duub, taladaydu waxeey tahay Bulshooy waa in aan yeelanaa calaamadahaan.
1- noqo qof wax qiimeeya.
2- Noqo qof leh qiimayn shaqsi ah.
3- noqo qof maskaxdiisa Xor u ah.
4- Noqo qof ujanjeera wanaagga.
5- ha noqon qof qaylo raac ah.
6- ha noqon qof xambaara afkaaro uusan ogayn.
7- Kala saar xaqiiqda iyo xamaasadda.
W/Q, Cabdiraxmaan Yusuf Cadaala.
Dhaqanka dad qalatada ah ee Al-Shabaab Diinta Islmaanka raad kuma laha.